BREAKING: Kenya oo shaacisay xilliga DF Soomaaliya sii deynayso Qaadka – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
BREAKING: Kenya oo shaacisay xilliga DF Soomaaliya sii deynayso Qaadka
June 19, 2022 Xuseen 4
Dowladda Kenya ayaa bixisay macluumaad dheeraad ah oo ku aadan xiliga dowladda Soomaaliya ay fasaxeyso Qaadka ka soo go’a beeraha dalkaasi ee loo soo dhoofin jiray Soomaaliya, si loogu suuq geeyo.
Wasiirka Beeraha dalka Kenya Peter Munya oo u waramay wargeyska THE STAR ayaa sheegay in 5-ta bisha soo socota ee Luulyo dib loo fasixi doono Qaadka oo suuqooda ugu weyn ahaa Soomaaliya, iyadoo mudada labada sano ee hakadka ku jiray hoos u dhac balaaran ki yimid dhaqaalaha dalkaasi.
Wasiirka ayaa sheegaya in heshiiska lagu saxiixi doono magaalada Nairobi oo ay tagi doonaan dalkaasi laba todobaad gudeheed madax sare oo kasocota dowladda Soomalaiya, Munya ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo waxa ay Soomaaliya ku bedelaneyso dib u furida suuqii Qaadka ee wadankaasi Kenya.
Si kastaba, Dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa 19-kii Maarso sanadii 2020 hakisay Qaadka Kenya, iyadoo sabab uga dhigtay cudurka Covid19, waxaana mudadaas dhexdeeda cirka sii galay khilaafka dhinaca badda oo sababtay in safaaradaha lakala qaato, iyadoo dhowr jeer uu fashilmay wadahadal lagu doonayay in Qaadka la fasoxo, maadaama suuqa kaliya ay heystaan uu ahaa midka Soomaaliya oo la keeni jiray 50 Tan oo Qaad ah.
Waa bilowgii guuldaradda xasan sheekh iyo kooxdiisa. Meeye kuwii farmaajo aflagaadayn jiray. Ma afki baa juuqa gabay???
Isbadalkii ka dhacay Somalia waxay kenya u dhaqantay sidii horeyba in ay masuul ka tahay oo ay xukunta xuduuda bada iyo bariga Somalia wixii soo galaa iyo wixii ka baxaa ee la yaab malahan arinkan waayo hogaanga dalka waxaa loo dhiibay LOO-TALIYE Mr Hassan sheekh 😅
Qofkasta waxaa LA xiqiijin karaa waxuu ahaa marka uu Meeshan ka tago.
Farmaajo waxaa lagu xusi Kara in uu qayb libaax ka qaatay siyaasada arimaha dibada ee somalia oo magaca Somalia qaymo u yeeleya….waa marka ay noqoto LA xisaabtanka dowladaha shisheeye. Laakiin siyaasadiisa gudaha ayaa ahayd mid aad u qaabdaran. Hadii uu saxi lahaa siyaasadiisa gudaha….waxuu isku darsan lahaa labo biladood iyo taageero aad u balaaran.
Xiligiisii hore ee uu xilka hayey…Siyaasada gurguurte ee gudaha waxay ahayd mid aad u qaabdaran oo aad u qabyaaladeeysaneyd
Tiisa dibadu’na ma lahayn madax iyo minjo.
Waxay u badantahay in xilkiisaan cusub uu isna ku dambeyn doono sida kisii hore oo kale…..madaama uu nin kenyaati ah ka dhigtay raiswasaare.
Waxay Kenya si toos ah u maamuli doontaa xukumada gurguurte.
Dalil waxaa u ah sida dagdaga ah ee jaadkii Kenya loo furay…..ayada oo xaataa Somalia xabad moos ah u dhoofin karin Kenya.
Waxa la sugaaba waa kenya oo Mar Labaad hesha saamiqeybsi culus ee ay ka hesho bada somalia
Kkkkk kinya waxeey u haysataa in madaxda Somali xasan sheeq iyo xamsa ula dhaqmayaan kinya xukunto